ब्लग यात्रामा वर्षदिन पुरा गर्नुभएकोमा तपाईंलाई र वर्षदिनको यात्रा पुरा गरेकोमा तपाईंको गोरेटोलाई हार्दिक बधाई ! निरन्तरता रहिरहोस् साथमा शुभ कामना पनि । नियमित क्रमका सम्पुर्ण ब्लगर मित्रहरुलाई नबिराई सम्झना राख्ने तपाईंको जाँगरलाई सलाम !
ब्लग को बार्सिकोउत्सवमा सुर्य जी लाइ उतर उतर प्रगतिको कामना छ | गएको बर्ष झैँ मिठा र रमाइला प्रसंगहरु लिएर उदाई रहनुस | सधै मित्र हरु को मन जित्न सफल रहनुस !
Daju dherai dherai subhakamana chha blog ko 1 barsa pura vayeko ma .........ajhai yestai stariya lekh haru padhna paios.........pragatiko subhakamana..............
ब्लग लेख्‍न थालेपछिको तपाईलाई चिने पनि ब्लग सुरु गर्नु अगिको तपाईको बारेमा भने थाहा थिएन। जे होस जिवनको तिता-मिठा अनुभवलाई खुलस्त र ईमान्दारीका साथ राख्‍नु भएको रहेछ। एकदमै आभार छ त्यसकालागि ।
मलाई पनि ब्लगीङ भनेको जिवनको एउटा रचनात्मक पाटो जस्तो लाग्छ । (कमसेकम यसमा लाग्नु खराव त हैन भन्ने मा कसैको दुईमत नहोला)
यो पक्कै पनि एक-अर्कामा बिचार बाँढने र केही सिक्ने सिकाउने सबैभन्दा राम्रो माध्यम बन्दै गएको छ ।
तपाईको बिगत एक सालको यात्रा पनि पक्कै पनि रोचक नै रह्यो होला भन्दै म तपाईको ब्लगिङ र व्यक्तिगत जीवन दुबैमा सफलताको कामना गर्दछु ।
सिकारुजी, हार्दिक बधाई! र आगामी दिनहरुमा पनि निरन्तरता र सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना!
सिकारुजी, हार्दिक बधाई तथा मंगलमय शुभकामना - तपाईंको ब्लगको यो वार्षिकोत्सबको सुखद उपलक्ष्यमा ।
तपाईंको ब्लगिङ यात्राको लागि फेरी पनि शुभकामना !
ब्लगिङ यात्राको वर्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै बधाई एवम् शुभ कामना ।
तपाईको ब्लगको निरन्तरता, लेखन र निजी जीवनमा पनि उत्तरोत्तर सफलताको कामना गर्दछु ।
Dherai Dherai badhai Sikaru ji...
Wish youagreat blogging career ahead...
सागर छल्किएर नयाँ छाल बनाएछ।
पालुवा पलाएर नयाँ बसन्ता दिएछ।
फूलहरु फुलेर नयाँ सुबास दिएछन।
ॠतु परिबर्तन भएर नयाँ मोड लिएछ।
लौ है हजुर सुर्य शिकारु जीको बर्षदिन पुगेछ।
हार्दिक हार्दिक शुभकामना म लगायत मेरो भोजेपुरे ब्लग अनि मेरो पलहरुको तर्फ बाट, तपाईंको आगमी दिनहरु यसरी नै खोला किनारसँग साउती मार्दै बगे जस्तो सुर्यले रोशनीसँग मिलाप गर्दै पृथ्बी हेरे जस्तो, चाँदनीले शितल किरण धर्ती र जीबहरुमा फ्याँके जस्तै चलिरहोस तपाईंको ब्लग, धन्यबाद।
सिकारु जी , तपाईं जस्तो निर्णय सबै ब्यक्तिले सहि ठाउँमा गर्न सकेका हुन्नन् कति बिछोड पछिका दिनमा सम्हालिनु नसक्ने अवस्थामा पुगेको पनि देखिन्छ हाम्रै वरिपरि । तपाईंको त्यो निर्णयलाई मेरो सलाम ।
रचनात्मक कार्यले सहकार्य भेट्छनै कुनै शंका छैन ।
यहि ब्लग संसारका मित्रहरुको सिर्जना ले हाम्रो जीवनमा कति राम्रा प्रभावहरु पारेकै छन् ।एक अर्कासँग सिक्दै सिकाउँदै ,जीवनका तिता मिठा पलहरु बाड्दै हातेमालो गर्दै अगाडी बढौं ।
तपाईंका रचना नियमित पढ्न पाइयोस यहि अपेक्षाका साथ बर्षदिन पुरा गर्नु भएकोमा बधाइ अनि धन्यबाद ।
सुर्यजी को ब्लगिंग यात्राका एक वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
हजारौं लाखौँ पाइलाहरु चाल्दै सफलताका गन्तव्यहरु तर्फ तपाईको यो गोरेटो निरन्तर लम्किरहोस ...
सिकारु जि धेरै-धेरै धन्यबाद सहित बधाई छ तपाई लगएत तपाईको गोरेटो रुपि ब्लगलाई,हुनत तपाई हाम्रो उदेश्य फरक भए पनि कुनै बेला एउटै गोरेटोमा यात्रा गर्न पुगिएछ।जुन सानो भलाकुसारीले तपाईको ब्लगको जन्म भयो।र आज निरन्तर्ताको साथै बर्षदिन पनि पुगेछ खुसि लाग्यो अनि भबिस्यमा पनि यस्तै निरन्तर्ताको साथ अगाडी बडोस हार्दिक-हार्दिक सुभकामना!!!! संगम
ब्लगिगंको एक बर्षसंगै आफ्नो सारा यात्रा बयान अनि संपूर्न ब्लगरलाइ सम्झेको मा धन्यबाद तथा बधाइ।
तपाइको ब्लगीगं अझ माथिल्लो उचाइमा पुगोस, बर्षौं बर्ष यसरीनै शुभकामना बाड्न पाइयोस।
तपाइको ब्लगको बर्षदिनको शुभकामना स्वरुप दौंतरीमा ब्लग भित्र ब्लगको निम्ता पनि टक्राउन चाहान्छू।
सिकारु जी ढिलै भयेपनि Happy Anniversary है त ...बर्ष दिनको यात्रा सफलताको साथ पुरा गर्नु भएकोमा बधाई तथा आउँदो दिनहरुको निम्ती शुभकामना र All The Best भन्न चाहन्छु ।
धेरै धेरै शूभकामना सिकारुजी !!! मेरो पनि अस्ति १ वर्ष पुगेछ जाँचको बेला परेर मैले त मनाउनै भ्याइनँ । हाम्रो पारस्परिक सहयोग र सहकार्य अझ बलियो र सुदृढ बनेर जानेछ प्रत्येक ब्लगहरूले खुड्किला पार गर्दै जाँदा !!
सिकारुजी तपाईलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना छ। तपाईको ब्लगिङको यात्रा अझ सुन्दर र सफल रहोस।
यहाँलाई बर्षदिनको शुभकामना । यात्रा निरन्तर चलिरहोस् ।
सरी है सुर्य ब्रो, मैले त पैला नै हेरिसके भनेको त यो पोस्ट हेरेकै रैनछु.. तपाईंको जन्मदिन को पोस्ट
ठिकै हो, तपाईं ले अली अघी को कथामा लेखे जस्तो जुवा तास खेलेर ट्याम पास गर्नु भन्दा त ब्लग्गिङ धेरै रचनात्मक कार्य हो.. एक बर्ष पुगेर म भन्दा जेठो ब्लगर हुनु भएछ.. बधाई अनी निरन्तरता को शुभकामना
अनी आफ्नो वार्षिक अंक को लेख मा यो चिसो तातो हावालाई पनि बहन दिनु भएको मा हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दछु
गोरेटोलाई र ब्यक्तिगत जीवनलाई पनि सफलताको लागि बधाई एवं शुभकामना दिनुहुने सम्पूर्ण आदरणिय मित्रजनहरुमा धेरै-धेरै धन्यबाद दिन चाहन्छु ।
पक्कै दिलीप जी यो कार्यमा लागेर फाल्तु समयलाई सदुपयोग गर्दै सबैसँग परिचित हुने अवसर मिल्नुका साथै हजारौ कुराहरुको भलाकुशारी गरि तमाम कुराहरु सिक्ने अवसर पाइएको छ । सायद यसभन्दा अघिको समयमा (ब्लग शुरु गर्नु भन्दा पहिले) चिनाजानी कसैसँग थिएन यही यात्राले यतिका साथीहरुसँग घुलमेल हुने अवसर मिलेको छ । यो निश्चय पनि सकारात्मक पक्ष नै हो ।
दिनेश जी बियोगमा मानिसले गर्ने कार्यप्रति सजग रहने प्रयास पनि हो यो मेरो।
बी. जे. जी खै कुन शब्दले सम्मान दिउँ हजुरलाई । मिठो कबिता सहितको आगमनले अत्यन्त खुसी छु ।
प्रबेश जी गफगाफ पनि बर्षदिन पुगेकोमा बधाई तथा शुभकामना यहीबाट टक्राउछु साथै जाँचमा सफलताको कामना ।
हावा ब्रो केहि छैन कतै पहाडमा ठोकीनुभएर ढिलो भए जस्तो छ ।
नेपालियन जी ब्लगभित्र ब्लगमा आमन्त्रण गर्नु भएकोमा धेरै धेरै खुसी छु । छिटै मिलाउने छु समयलाई ।
भाइ सुर्य ब्लग को बर्ष पुरा भय को उपलक्ष मा हार्दिक बधाइ तथा सुभकामना र आउदो दिन हरु मा पनि रमाइला रमाइला प्रस्तुति हरु अबस्य नै आउने नै छन
ढिलै भएपनि सुर्य जि लाइ मेरो पनि बधाई छ! यो तपाईंको ब्लगगिङ यात्रा को १ बर्ष पुरा गर्नु भएकोमा र शुभकामना छ आगामि सुखद र सफल यात्राको लागि। साँच्चै तपाइका लेखहरु मननिय छन् समयले भ्यायसम्म म पनि mysansar र तपाइको blog पनि पढ्ने गर्छु भलै प्रतिकृया लेख्ने मेसो नपाएपनि। तापाइको यो प्रयास निरन्तर अगाडि बढिरहोस!
म त ब्लगिङ दुनियाँबाटै एक कोस पर बसेको बेला यो वर्षदिनको सिकारु-सम्झौटो तयार भएछ । प्रतिकृया लेख्न ढिलो भयो । निकै धेरै शुभ कामना !
सिकारुको गोरेटो पछिल्ला समयमा निकै झ्याङ्गिदै एउटा अलग्गै मूलबाटो स्थापनामा चिनारी बनाउन थालेको पाएको छु । यो लगन जारी रहोस् । गोरेटो यात्राको क्रममा हाम्रो चिनाजाना को मूल्य पनि अचाक्ली प्रिय छ ।
प्रेमको तापले सुरु गर्नुभएको रहेछ ब्लगिङ, राम्रो काममा पोखियो प्रेमको ऊर्जा ।
अनि पुछारमा गोरेटाका सहयात्रीमा रहेका सबै साथीहरुको सूची नबिराई उतार्नुभएछ, सम्झनाको लागि धेरै धन्यवाद ! आफ्नो नाम भने सच्याइमाग्द कुनै अन्यथा नहोला , म रमेश कार्की होइन, जीवन कार्की हुँ । अनि, कतिपयले मेरो नाम Jotare Dhaiba लाई नेपालीमा उच्चारण गर्दा 'जोतारे धैब', कतैकतै दैब भन्नुहुन्छ, यो मेरो साहित्यिक नामको सही हिज्जे 'जोतारे धाइबा' हो, यही आँगनीबाट सबैलाई सूचना गर्छु ।
हत्तेरी, माफी त मैले माग्नु पर्ने भएछ है धाइबा जी । यति परिचित भएर पनि बिराएछु । क्षामा त पक्कै गर्नुहुन्छ होला । रमेश जी बाट जीवन जी भनेर सच्चाएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु यही बाट ।
अन्तिममा सिकारु भेटन आउने सबै सथीहरुलाई धन्यबाद ।
Madan Mani said...
सिकारुका पाइलाहरु नै हुन जसले पछि लिड गर्छ ।
यहाको ब्लगिड अगाडी बढोस्
ब्लग गर्ने मामलामा हामी कटुवाल अनलाइनमा अल्टरनेटिभ आवाजको पक्षमा छौं
Happy Birthday dear Blogger! Congratulations for completing one year of successful blogging. Best wishes for many such years to follow...
कालोपत्रे र हवाइजहाजको जमानामा सरल नेपाली गोरेटोबाट नै पाठकलाई सहि गन्तब्य/ निष्कर्षमा पुर्याउन सक्नु यो ब्लगको खुबी हो | यो ब्लगले सरलता र सकारात्मकको बास्तबिक उदाहरण दिएको छ |
जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सुर्यजी र छबिलाल न्यौपानेजीलाई हार्दिक शुभकामना |